कक्षामा गयल छात्राका कुरा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पछिल्लो समय सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका महिनावारीमाथिका बहस पनि प्रभावकारी देखिएका छन् । विभिन्न संघ–संस्थाले गाउँ–गाउँमा ‘प्याड’ बनाउने तालिम दिन्छन् । र, स्कुलमा पनि महिनावारी सरसफाइबारे तालिम सञ्चालन हुन्छन् । नेपाल सरकारले यसै वर्षको बजेटमा १३ लाख ४० हजार छात्रालाई नि:शुल्क ‘प्याड’ वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । तथापि पहाडमा भन्दा बेग्लै प्रकारको लैंगिक सम्बन्ध भएको मधेसका देहातका दलित र विपन्न वर्गमा यसबारे पर्याप्त चेतना पुग्न सकेको छैन । सहरमा बसोबास गर्ने, शिक्षित र नयाँ पुस्तामा महिनावारीबारेको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि ग्रामीण भेगमा यो अझै ‘लाज’ कै विषय छ । तसर्थ महिनावारी लाजको होइन, गर्वको विषय हो भन्ने अनुभूति सबैलाई दिलाउनु चुनौतीपूर्ण पक्कै छ । तर, यो अनुभूति पैदा गर्नु अत्यावश्यक छ । प्रकाशित : असार ६, २०७७ ११:५०
हाम्रो रहर हामीले केही सिकाउँदा बच्चाले एकैचोटिमा बुझोस् र गल्ती नै नगरी सिकाए जस्तो गरिहालोस् भन्ने हुन्छ । हामीलाई बच्चा ‘अल्लाद्दिनको जिन’ जस्तो चाहिएको छ, तर पाउनलाई त आफूजस्तै पाइएको छ । बच्चा त हाम्रै जिन हो, अल्लाद्दिनको होइन । हाम्रा राम्रा–नराम्रा सारा कुरा आफूभित्र लिएर आएको छ । ऊ हाम्रो अंश हो । उसलाई कस्तो बनाउने भन्ने त हाम्रै हातमा हुन्छ । जे रोप्यो त्यही फल्छ । जसरी मलजल गर्‍यो, त्यही अनुसार सप्रने कि बिग्रने भन्ने निर्भर गर्छ । त्यसैले उसका सँगसँगै आफ्ना कमीकमजोरीमा पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । ‘फूल टिप्नु हुँदैन है’ भन्दै गाली गरेर उसकै अगाडि राम्राराम्रा फूल टिपी भगवान्लाई चढाएको हामीलाई यादै हुँदैन । हामी यस्ता धेरै काम गर्छौं र बच्चालाई अलमलमा पार्छौं । अनि हामीले सिकाएर बच्चाले के सिक्ला ? हामीले बनाएर भविष्यमा के बन्ला ? कस्तो बन्लान् ?
प्रकाशित : असार ६, २०७७ १०:३९